Shiinaha Silver daahan spandex dahaarka tabinta / gaashaan saarayaasha iyo alaabada | 3L Tex
Dhar nadiif ah oo nadiif ah oo loo yaqaan 'polyamide spandex spandex'
Dharka gaashaan ee ugu wanaagsan ee shaqooyinka lidka ku ah bakteeriyada, qalinka lagu dahaadho sheyga saldhigga polyamide / nylon spandex, waa mid xirxiran, is kala bixin kara, jilicsan oo deggan. Waa badeecad tiknoolajiyad sare leh oo lagu helo iyadoo si joogto ah lacag loogu xidho maaddada nylon iyada oo loo marayo farsamo casri ah oo gaar ah. Qaab-dhismeedkani ma aha oo kaliya inuu ka dhigo fiber-ka lacag inuu ilaaliyo hantida asalka ah ee dharka, laakiin sidoo kale wuxuu siinayaa dhammaan howlaha sixirka, saameynta lacagta. Maaddaama ay tahay wax dabiici ah, lacagta ayaa gebi ahaanba caafimaad leh, deegaan / cagaaran iyo keyd ah.
Feature Main: Cadaadis aad u hooseeya, hirarka hirarka elektromagnetic, shucaaca anti-shucaaca, bakteeriyada, deodorant (diidmada), baabi'inta korantada ma guurto, muruqa kiciya, nidaamiya heerkulka jirka, ka hortagga UV, cagaarka dabiiciga ah, hawo hawo sare, la dhaqi karo / dib loo isticmaali karo. , waxqabadka gaashaanka sare.
MCodsiyada ain: Waxyaabaha ugu fiican ee gaashaanka, shucaaca kahortaga, nigiska casriga ah, dharka, qalabka iyo dharka guriga, dharka ka hortagga bakteeriyada, maaskarada, galoofyada iyo dharka guriga, alaabada caafimaadka, isboortiga, faa'iidada muruqyada, badeecooyinka la istcimaalo, alaabada ka hortagga ma guurtada ah.
Hore: Polyester Taffeta Rinjiga Copper Copper Conductive Fabric
Xiga: Dhar polyamide dahaarka leh oo hufan / dhar gaashaan leh
Shabag shaashad qalin ah oo dahaadh ah